Annaga nagu saabsan - Axdiga Learning Summit
Ilaa iyo 2008, iskuulkeenu wuxuu hormuud ka ahaa dhaqdhaqaaqa bilowga ah ee Waxbarashada Virtual Education ee Gobolka Oregon.
Diiwaangelinta 1200 arday oo ka kala socota Portland Metro Area oo galaya barnaamijyadeena 3aad.
Waa wax lala yaabo in laga fekero dhammaan isbeddelada ay tikniyoolajiyaddu noo keentay iyo dhammaan agabyadii aan u isticmaalnay hagaajinta gudbinta tilmaamaha.
Kooxdayadu waxay nala joogeen tan iyo markii la istcimaalo taleefanka Blackberry!
Axdiga Wax-barashada Summad-weyne waa iskuul dadweyne oo BILAASH ah oo ay kafaalo qaaday iskuulada degmada Estacada.
Waxaan abuurnay kooxda, ka dib waxaan abuurnay aragtida.
Sheekadeena waxay bilaabmeysaa 12 sano kahor markii internetku uu ahaa meel aad uga yar. Sannadkii 2008, iyada oo la kaashanayo Iskuulada Degmada Estacada, Summit wuxuu bilaabay safar dheer oo aan la ilaawi karin. Inta la abuurayo 'Bwaa qarsoodi xaga waxbarashada', Summit wuxuu sii wadaa inuu horumariyaa oo uu cadeeyo sida aan u taageerno ardayda barta ..
Sideen ugu guuleysan karnaa tan?
Tan kaliya ayaan wada fulinaa.
Iskaashi lala sameeyo qoysaska.
Kala guurida kombiyuutarka iyo isu imaatinka.
Xaqiiqdi, waxaan ku takhasusay waxbarashada casriga ah iyo aaladaha wax barista dijitaalka, laakiin ku lug lahaanshaha ardayda barta ayaa ah mashiinka dhaqaajiya ururkan
Jadwal buuxa, 2 maalmood / todobaad ah oo ku saabsan kobcinta IN QOFKA ku habboon khibradeena moodelkeena.
Waxaan ku diyaarin karnaa qorshe waxbarasho oo barta kasta leh aaladaha qoraalka ah ama aaladaha wax barista dhijitaalka ah, fasalada LIVE iyo Asynchronous, iyo xulashooyinka manhajka kala duwan si aan u dhisno taageero joogto ah oo dhab ah dhammaan xulashooyinka barnaamijkayaga.
Tababbarka Waxbarshada - Kaalintaada waalid ahaan waligeed muhiim kama aheyn.
Inaad noqoto Tababbarka Waxbarashada ee wax ku oolka ah waa aaladda kaliya ee ugu muhiimsan waxbarashada ardayda!
Laakiin taasi muxuu u eg yahay? - Doorkeena TOP SANADKA Tababbarka waxbarashadda!
La hadal / Weydii su'aalo
Caawi Dhismaha Caadi
Joogitaanka horay ee qalooca waa caqabad soo dhaweyn ah. Shir-madaxeedku wuxuu sii wadaa baaritaanka iyo hirgelinta fursadaha arday kasta. Summit wuxuu hogaaminayaa warshadaha, wuxuu kordhinayaa shaqaalaheena, wuxuuna raadsanayaa tusaale hal abuur leh "HOW" si loola macaamilo bartayaasha.
Abuuritaanka iskuul charter ah oo bixiya wadashaqeyn buuxda oo waxbarashada ah supports Taasi waxay lashaqeeysaa bartayaashayada waxayna dhisayaan buundooyin… Taasi waxay kuxirantahay bulshadeena waxayna ka caawineysaa dhamaan ardaydeena inay arkaan riyooyinkooda.
Mustaqbalkayagu waa mid dhalaalaya!
Hadafka iskuulka waa xoojinta (Bulshadeena Barata) adoo abuuraya dhaqan waxbarasho that u diyaariyaa ardayda guul u horseed adduun shaqo ama waxbarasho dugsi sare kadib.
Waxbarashada dadweynaha ee bilaashka ah. Axdiga Barashada Summit wuxuu ku takhasusay Wax-barashada Virtual oo lagu daray barnaamijyada Real - Life Enrichment iyo Dual credit.
Mawduucyada Himilada - Awood-siiya arday kasta oo leh caqabad, hal-abuur, iyo waxbarasho shaqsiyeed.
Qoysku waa taageerada aasaasiga ee bartaha
Kaqeybgalka qoyska, ka qeybgalka, iyo taageerada waa la soo dhaweynayaa lagana filayaa
Barashada shakhsiga ah / maahan “hal-cabbir dhammaantiin”
Xiriirka ardayga ayaa muhiim u ah waxqabadka ardayga iyo guusha waxbarasho
Arday kasta wuu baran karaa
Arday kasta wuxuu u bartaa si kala duwan
Bixi xulashooyinka manhajka hodanka ah iyo noocyo kala duwan iyo qaabab waxbarasho
Horumar isdaba joog ah ayaa la filayaa
Loogu talagalay hay'adda
Sheekooyinka Guusha Ardayga
"Guushu maahan shil. Waa shaqo adag, tixgelin, barasho, u hurid, iyo inta badan… jacaylka waxa aad qabanayso.”- Pele
Waxaa sharaf noo ah in aan iskaashi la yeelanno qoyskaaga iyo bartahaaga socdaalkan cajiibka ah!
Laga soo bilaabo Degaanka Portland.
Ku biirey fasalka 9aad dayrta 2016.
Waxaan marwalba jeclaa inaan ka shaqeyn karo gurigeyga xawaarehayga aniga oo waliba iman kara kaqeybgalka fasalada tooska ah iyo ikhtiyaarrada kobcinta ee xerada. Waxay ahayd 4 sano, waxaan ahay qorshe sare inaan ka qalinjabiyo Summit bisha Juun.
Waxaan khibrado badan oo layaableh ku soo qaatay Summit, way adkaan doontaa in laga tago. Maadooyinka aan qaatay waxay igu xujeeyeen inaan isku dayo inaan noqdo kan ugu fiican. Macallimiinta iyo hawlwadeennada Shir-madaxeedku had iyo jeer waa la heli karaa iyagoo shakhsi ah, emayl toos ah ama xitaa qoraal; markasta oo aan su'aal ka qabo taageerada aan u baahdo mowduuc.
Waan turunturoonayaa oo waan u halgamayaa mararka qaarkood si aan u caddeeyo waxa aan u baahanahay inaan sheego. Tani waligeed dhibaato kuma aysan noqon shaqaalaha Summit. Had iyo jeer way dulqaataan oo waxay i siinayaan waqti aan ugu baahdo inaan ku hadlo. Koorsooyinka kobcinta sida Orchestra iyo Leadership ayaa i baray inaan banaanka isa soo dhigo inkasta oo hadalka aan naafo u ahay oo aan hogaamiye ka noqdo asxaabteyda iyo bulshada.
Tani waxay iyana i siisay kalsooni aan ku sii wado koorsooyinka kulliyadda bulshada iyada oo loo marayo barnaamijka Kuleejka Hore ee Summit. Hadda waxaan xaadirayaa xilli-ciyaareedkeygii seddexaad ee kuleejka bulshada anigoo wali dhameystiraya koorsooyinkeyga Summit, xoogna waan u socdaa
Hadafkeygu waa inaan ka qalin-jabiyaa Shir-weynaha bisha Juun, 2020 oo aan sii waddo shaqada adag ee kulliyadda bulshada ee kan xiga illaa laba sano, anigoo ka shaqeynaya shahaadada Sayniska Kombiyuutarka. Waxaan markaa qorsheynayaa inaan u wareego kulliyadda afarta sano ah oo aan ku helo shahaadada koowaad ee cilmiga kombiyuutarka. Waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo barnaamij ciyaarte oo u shaqeeya Nintendo of America.
"Si kasta oo ay wax u adkaadaan, Ha joojin- Josh Davis
Waa 2020 oo waxaan ahay arday cusub oo ka socda Berkeley oo bartay cilmiga kombiyuutarka. Waxaan ahay qof aad u hanweyn oo kaqalinjabiyay barnaamijka Summit's Early College program mudo labo sano ah. Waxaan doortay Kulliyadda Hore ee Summit maxaa yeelay waxay i siisay xorriyad aan caadi ahayn: Waan xulan karay koorsooyinkeyga, waxaan dooran karaa macallimiintayda, waxaan dooran karaa maalmaha aan doonayo inaan aado dugsiga waxaanan xushaa bilaha aan u aadi karo Yurub fuulista iyo safarka.
Muddo kasta ka hor, La-taliyahayga Heather Stouder ayaa igu dhiirrigaliyay inaan sharraxo danahayga iyo rajadayda. Waxay dib u eegis ku sameysay tilmaamaha Oregon si ay u hubiso inaan ku socdo wadadii qalinjabinta mar walbana ay awood u laheyd inay ka jawaabto su'aalaha aniga iyo waalidkey. Waxaan sidoo kale haystay la taliyayaal PCC ah oo aan wax ku sawiro. Iyo, maaddaama qaar ka mid ah fasallada kuleejka bulshadeyda ay wax ka yaryihiin ardayda 10-15, waxaan si fiican u bartay macallimiinta. Way ila taliyeen, way i taageereen waxayna ii soo qoreen talooyin weyn. Thanks to Summit iyo PCC, hadda waxaan aad ugu faraxsanahay macallimiinta iyo lataliyayaasha ku saabsan waxbarashadayda Berkeley. Hore ayaan usameeyay laba sano.
Laba sano kadib markii aan taageeray Shir-weynaha, waxaan ku qalin-jabiyay shahaadada dugsiga sare, kulleejooyinka culuunta farshaxanka iyo shahaadada kuliyada cilmiga sayniska. Iyo, inta aan hadda u diiwaangashan yahay sidii qof cusub oo Berkeley ah, in badan oo ka mid ah buundooyinkeyga kulleejooyinka bulshada ayaa la aqbalay sidaas daraadeed xaaladdeyda rasmiga ahi waa mid Junior ah. Intaa waxaa sii dheer, markii aan dalbado shaqooyinka iyo laylisyada, resumeyga wuxuu muujinayaa inaan dhammeeyay shahaadada Associates inta lagu jiray dugsiga sare oo caddeynaya inaan ahay arday wax u go aan ah.
Had iyo jeer waan ku faanaa in aan idhaahdo waxaan ka qalin-jabiyey dugsiga sare ee 'SLC' oo aan kahadlo dabacsanaan iyo fursadaha uu barnaamijkoodu i siiyay dugsiga sare. Waxaan u maleynayaa in ugu muhiimsan, in SLC ay i siisay adduunyo ka weyn kan kaliya dugsiga sare ee dugsiga sare.
Bayaanka Waalidiinta Sonja: Markii aan ku dhiirigelinay Sonja inay ka fikirto kulleejkii hore asxaabta qaar waxay moodeen inaan gabadheena ku riixeyno inay si dhaqso leh ku dhameysato dugsiga sare. Maya. Taas badalkeeda, waxaan ku dhiirigelinay inay doorto barnaamij leh liiska nolosha iyo fursadaha ugu waaweyn. Kulliyadda Summit waxay ogtahay in ardaydooda iyo qoysaskoodu ay raadinayaan khibrad kobcineysa - maahan shahaadada dugsiga sare ee caadiga ah. Waad ku mahadsantahay Axdiga Barashada Summit taageeradaada aan caadiga ahayn, dabacsanaanta iyo naxariista.